सय दिन काम नगरी फेरिए तीन मेसु | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७८ बैशाख ६, सोमबार ०७:२२ गते
भरतपुर । भरतपुर अस्पतालमा छोटो समयमा पुनः मेसु परिवर्तन भएको छ । कार्यरत मेसु डा. वासुदेव पाण्डेको अनिवार्य अवकाशसँगै पुनः नयाँ मेसुको खोजी भएको छ ।
गत फागुन १५ गते भरतपुर अस्पतालको मेसुका रुपमा आएका पाण्डे दुई महिना अवधिमा अनिवार्य अवकाशका कारण शनिबार बिदा भएका छन् । यसअघि मेसु परिवर्तन हुनुमा राजनीतिक कारण देखाइए पनि यसपटक भने डा. पाण्डेको अनिवार्य अवकाश मेसु परिवर्तनको कारण बनेको हो ।
गत ०७७ भदौ २८ गते मेसुका रुपमा आएका डा. राजन पाण्डे ३ महिनामात्रै काम गरेर मंसिर ८ गते बिदा भए । मंसिर ९ गते निमित्त मेसुका रुपमा अस्पतालमा कार्यरत डा. जगन्नाथ तिवारीले जिम्मेवारी लिए ।
तर, फागुन ५ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेसुका रुपमा जीवाणु विज्ञ डा. वासुदेव पाण्डेलाई भरतपुर अस्पताल पठायो । तिवारीले जम्मा ३ महिना काम गरे । फागुन ५ गते भरतपुर अस्पतालका मेसुको जिम्मेवारी लिएका वासुदेव पाण्डे अनिवार्य अवकाशका कारण छोटो समयमै बिदा भए ।
अस्पतालको सुधारका लागि केही योजना अघि सारेको अवस्थामा आफू अनिवार्य अवकाश लिई बिदा हुनु परेको डा. पाण्डेको भनाइ छ । छोटो समय भएपछि धेरै कुरा बुझ्न पाइएको उनले बताए । मेसु अनिवार्य अवकाश पाई बिदा भएपछि भरतपुर अस्पतालमा त्यही कार्यरतहरुबाट मेसु तोक्ने वा मन्त्रालयले बाहिरबाट पठाउने भन्नेमा पुनः राजनीतिक खेल सुरू भएको छ ।
भरतपुर अस्पतालको सुधारका लागि राजनीतिकभन्दा पनि प्रशासनिक व्यक्तिको खाँचो भएको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । यसअघि मेसु रहेका श्रीराम तिवारी, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, डा. जगन्नाथ तिवारी, हालका निमित्त डा. युवानिधि बसौलालगायतको चर्चा रहेको छ । सरकार वा सम्बन्धित मन्त्री फेरिएपछि फेरिने गरेको मेसु अहिले एउटै सरकार हुँदा पनि ७ पटक फेरिइसकेको छ ।
नयाँ सरकार बनेयता डा. रूद्र मरासिनीको ठाउँमा डा. रविन खड्का, डा. खड्काको ठाउँमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र डा. पौडेलको ठाउँमा डा. बगाले र बगालेको ठाउँमा डा. श्रीराम तिवारी मेसुमा नियुक्त भएका छन् ।